समावेशिताको नाममा काठमाडौंको उपनिवेशवाद
- यतिष ओझा
लोकतन्त्रबारे एउटा मान्यता छ- कुनै पनि समाजमा या त लोकतन्त्र हुन्छ, या लोकतन्त्र हुँदैन । आंशिक लोकतन्त्र हुनु भनेको लोकतन्त्र नभएको स्थिति हो । ठीक त्यस्तै- नेपालमा समावेशी सहभागिता देखिँदैन ।
समावेशी सहभागिताले मान्छेका टाउका ल्याएर जोड्ने मात्र होइन । मानिसहरूलाई जोड्ने हो, समेट्ने हो । मान्छे भनेका टाउकाको गन्ती मात्र होइनन्, भाषा हुन्, संस्कृति हुन्, भूगोल हुन्, वेशभूषा, रहनसहन सबै हुन् । टाउका मात्र गनेर यी सबै नजरअन्दाज गरिदिने भए किन चाहिन्थ्यो र मानिस ? निर्जीव गुडियाहरूले पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गर्दा हुन् ! राज्यले समावेशी सहभागिताको देखाउने दाँत त लगायो तर मानिसका पहिचानलाई सहभागी गराउन चाहेन, सकेन ।
एउटा मधेसी नेतालाई समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तअनुरूप संसद् भवनमा ल्याइन्छ । तर, उनलाई त्यहाँ मधेसी बन्न दिइँदैन । उनलाई आफ्नो धोती, गम्छा लगाएर संसद् छिर्न दिँदैन सत्ताले । दौरा सुरुवाल र टाइसुट भिराइदिन्छ । काठमाडौंले उनीसँग पूर्वसर्त राख्छ । तिमी सहभागी हुने हो भने, तिमी-तिमी हुन पाउँदैनौ । तिमी हामी हुनुपर्छ । अनि मात्र तिम्रो लागि ढोका खुल्छ । यसरी ती मधेसी आफू बनिरहन पाउँदैनन् । उनले आफ्नो भाषा बोल्न पाउँदैनन् । राज्यसत्ताको वरिपरि रहनेहरूले उनलाई मातृभाषा बोल्न दिँदैनन् । बोलिहाले घोर राष्ट्रघाती बनाइन्छ ।
विभिन्न किसिमका आक्रमण हुन्छन्, हमला हुन्छन् । व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत धावा बोल्छन् सत्ताका प्युसाहरूले । सरिता गिरीले नेपालको राष्ट्रभाषामध्येको एक हिन्दीमा संसद्‍मा सम्बोधन गर्दा उनीमाथि भएका आक्रमणका शृंखला ताजै छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्न सकिने सार्वभौम संसदमै यो अवस्था देखिँदा अन्यत्रको स्थिति कहालीलाग्दो छ ।
नेपाली भाषामा नबोले बोल्नै नपाउने न्यारेटिभ यही राज्यले बनाउँछ । जसोतसो सकी नसकी टुटेफुटेको नेपालीमै भए पनि आफ्नो सहभागिता सुनाउन चाहन्छन् एक गैरखस नेता । उनको नेपाली भाषाको अज्ञानतालाई व्यङ्ग्य गर्छ राज्य । उसका प्युसाहरू व्यक्तिगत आक्रमण त गर्छन् नै, यही प्रसंगलाई लिएर सिंगो समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तमाथि पनि प्रहार गर्छन् । सिद्धान्त नै गलत हो, प्रणाली नै असफल भो भन्दै ती गैरखस नेताको बदनाम गराउँछन् । समावेशी प्रतिनिधित्वले बोल्नै नसक्ने, नजान्ने नेता छान्यो भनेर दुत्कार्छन् प्रणालीलाई । 'बोल्नै नजान्ने होइन, तिम्रो भाषा मात्र नजानेको हो । तिमीलाई पनि त मेरो भाषा आउँदैन' भन्नै पाउँदैनन् ती नेताले । राज्यको ठेक्का लिएका कथित् राष्ट्रवादीहरू उनको घरमा ढुङ्गा हान्न पुगिसकेका हुन्छन् ।
समावेशी सहभागिता आफैँमा विशिष्ट प्रणाली हो । नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा त झन् अत्यावश्यक नै हो । विविधताको सम्मान गर्ने मामिलामा सायदै यसको विकल्प भेटिएला । तर, राज्यले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचेझैँ गर्छ। विविधतालाई निषेध गर्छ । फरक पहिचानलाई निषेध गर्छ । काठमाडौं आउनका लागि आफ्नो भाषा त्याग्नुपर्छ, पहिरन त्याग्नुपर्छ ।
पस्किएर खाना दिएर मात्र पनि हुँदैन । खाना के पकाउने भन्ने निर्णय पनि गर्न पाउनुपर्छ । खाना पकाउने तरिका चुन्ने वा आफैँ पकाउने निर्णय गर्न पनि पाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था 'खान नपाएकाहरूलाई खान दिएकै छौँ त' भनेजस्तो मात्रै भयो । चुलामा सबैको पहुँच पुग्न सकेन । समावेशिता त्यहीँ चुक्यो ।
संसद्‍ भवनमा रहेकाहरूको नागरिकताको नाम र लिङ्गमा मात्र विविधता कायम छ । वास्तविकतामा विविधतालाई स्वीकार्नै सक्दैन राज्यले । समावेशी सहभागिताका नाममा काठमाडौंले आफ्नो सांस्कृतिक, भाषिक उपनिवेशवाद बेचिरहेको छ । यो समावेशिता होइन, अतिक्रमण हो । एकातर्फ पहिचानलाई परास्त गर्दै छ, अर्कातर्फ समावेशी सहभागिताको प्रणालीकै विरुद्ध वकालत गराउँदैछ । आफैँ लागेको छ - प्रणालीलाई असफल बनाउन ।
शताब्दीऔँ लामो सामाजिक, राजनीतिक बहिष्कार र निषेध खेपेका वर्ग, समुदायको सामूहिक उत्थानका लागि संविधानले समावेशिता सुनिश्चित गरेको छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण त भइसक्यो । तर, अझै पनि सत्ता त्यो एकात्मक शासन प्रणालीको धङधङीमै छ । एक प्रकारको पोशाक लगाउने, एक प्रकारको भाषा बोल्ने र एक प्रकारको भूगोलमा बस्नेहरूकै नियन्त्रण छ अझै । उनीहरू इतिहासले पीडित बनाएका वर्ग समुदायको भविष्य अझै आफ्नै हातमा रहेको अभिमान बोकिरहेका छन् । लैङ्गिक समावेशितालाई त पितृसत्ताले टोकनवाद बनाइदिएको छ । प्रतिनिधित्वमा सीमित पारिरहेको छ महिलाहरूलाई । अर्थपूर्ण सहभागिता कत्ति पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
समावेशिताले आशातित प्रतिफल नदिइरहँदा प्रणाली नै असफल बनाउन खोज्नेहरू अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू हुन् । राज्य जहिल्यै पनि निरंकुश हुन चाहन्छ, अधिनायक हुन चाहन्छ । तिनै राज्यबाट सञ्चालित शक्तिहरू निरंकुशताकै पक्षधर रहन्छन् । समावेशिता दिगो शान्ति र समग्र विकासका लागि प्रमुख मार्ग हो । समाजको संरचनात्मक विभेद र पिछडिएका समुदायलाई वर्जित गर्ने एकात्मक प्रणाली हटाउन समावेशिताको विकल्प नै छैन । यसलाई सुदृढ बनाउँदै, राज्यलाई थप खबरदारी गर्दै साँच्चैको समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्न सबैको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
संविधानमा समावेशिता ?
संविधानले समावेशिताको रक्षा त गर्‍यो तर देशको ठूलो हिस्साले अझै त्यस संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन । जुन संविधानका आधारमा समावेशिताको अभ्यास हुँदैछ, त्यो संविधान आफैँ चाहिँ कत्तिको समावेशी छ त ? जेलाई मानक मानेर सहभागिता सुनिश्चित गरिँदै छ, त्यो आफैँचाहिँ कत्तिको समानतामा आधारित छ त ? आत्मनिर्णय र नागरिकताका विषयमा महिलालाई कम अधिकार दिइएको विचारहरू उठिरहेका छन् ।
देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भूगोल- मधेसले यस संविधान जारी गर्दाताका ५० भन्दा ज्यादा ज्यानको बलिदान दियो । अझै पनि यसलाई आफ्नो संविधान मान्न तयार छैन । काठमाडौंले संविधान जारी गरेर दीपावली गरिरहँदा मधेसमा यही राज्य मधेसी जनताको रगतमा होली खेल्दै थियो । अहिले काठमाडौं झिलीमिलीसहित संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस शोक दिवस मनाउँछ, कालो दिवस मनाउँछ । त्यस कारण सर्वप्रथम यस संविधानलाई समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।
विविधतालाई सम्मान गर्दै विभिन्न लैङ्गिक, क्षेत्रीय, भाषिक, जातीय, समुदायका अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । संविधान बहुमतको जित र अल्पमतको हार कदापि हुँदैन । यो त सहमतिको दस्तावेज बन्नुपर्ने हो, अल्पसंख्यकको रक्षक बन्नुपर्ने हो । सीमित वर्ग, समुदाय र लिङ्गका व्यक्तिको आदेशका भरमा जारी भएको कथित ‘समावेशी’ संविधान साझा राजनीतिक दस्तावेज बन्नै सकेन । समस्याको मूल जरो यही नै हो ।
टोकनवाद होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता
समावेशी सहभागिता कानुनतः अनिवार्य भएका वा सार्वजनिक चासो अलि धेरै हुने स्थानमा टोकनवादको अभ्यास गरिन्छ । सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न र आफू समावेशी छु भनेर देखाउनकै लागि केही पिछडिएका समुदायका व्यक्तिलाई टोकनका रूपमा सहभागी गराइदिने अभ्यास नै टोकनवाद हो ।
टोकनवादको अभ्यास राज्यसँगसँगै सामाजिक, व्यापारिक संघसंस्थाको चेतना र नियतमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरू अझै पनि नीति निर्माणको तहमा, नेतृत्व तहमा, संगठनको अग्रभागमा वा कुनै कार्यक्रमको मञ्चमा सीमित समुदायका व्यक्तिहरू मात्र रहनुपर्छ भन्ने सोचले ग्रसित छन् । त्यसैले त पिछडिएका समुदायको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनै दिँदैनन् । उनीहरूलाई केवल पीडितको रूपमा देखाइन्छ । उनीहरूलाई असक्षम सावित गर्न सिंगो संरचना नै उद्दत हुन्छ ।
सामाजिक संरचनाको माथिल्लो तहमा रहनेहरूले पिछडिएका समुदायको मुद्दा पनि नबोलेका होइनन् । बस्- उनीहरू त्यस समुदायलाई आफैँ बोल्न दिँदैनन् । उनीहरू टोकनभन्दा बेसी केही बन्दैनन् । संग्रहालयमा कुनै नौलो वस्तुलाई जसरी सजाइन्छ । समावेशिता भनेकै अर्थपूर्ण सहभागिता हो, जुन अहिले शून्यप्रायः छ ।
सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन एउटै मात्र उपाय छ- सुअवसर प्राप्त वर्ग, समुदायले पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई आवाजविहीन ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । प्रदर्शनीमा राखिएको वस्तुलाई जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । पिछडिएका समुदायका व्यक्ति पीडित मात्र हुँदैनन्, विचारक, मार्गदर्शक पनि हुन्छन् । उनीहरू पनि विचार व्यक्त गर्न सक्छन्, समाज र राज्यलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छन् । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । समानतामा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अनेकता, समता र समावेशिता
नेपालमा समावेशिताको अभ्यास अनेकतामै सीमित भयो । फरक-फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सहभागी गराउँदा मात्रै राज्यले आफू पूर्ण समावेशी भएको डम्फु पिट्यो । त्यही अनेकता पनि आंशिक मात्रै छ ।
टोकनवादको अभ्यास राज्यसँगसँगै सामाजिक, व्यापारिक संघसंस्थाको चेतना र नियतमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरू अझै पनि नीति निर्माणको तहमा, नेतृत्व तहमा, संगठनको अग्रभागमा वा कुनै कार्यक्रमको मञ्चमा सीमित समुदायका व्यक्तिहरू मात्र रहनुपर्छ भन्ने सोचले ग्रसित छन् ।
जनजाति, दलित, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी आदि पिछडिएका समुदायको केवल टाउको भेट्न पनि मुस्किल पर्छ । राज्य त एकात्मक भयो भयो, सामाजिक अग्रगमनको पक्षमा लड्ने संघसंस्थाहरू पनि अनेकतामै चुकिरहेका छन् । नेतृत्व र विचारको तहमा अनेकता भेट्नै गाह्रो छ । तथापि, समावेशिता सुनिश्चित गर्ने पहिलो खुट्किला अनेकता नै हो ।
अनेकतासँगै सहभागी भएका सम्पूर्णमा समानता र समताको अवस्था पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत र साधनमा समान पहुँच र समानताको आधारमा अवसर पाउने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ । अनेकतालाई समतामा परिणत गर्न सके बल्ल समावेशिताको यात्रा अघि बढ्छ । प्रत्येक सहभागीले अपनत्व महसुस गरेर पूर्णतः समानताको अभ्यास गर्दै अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता प्रस्तुत गर्नु नै समावेशिताको मूल लक्ष्य हो ।
समावेशी लोकतन्त्रको निर्माणमा केही कदम अवश्य चालिएका छन् । केही प्रगति भएका छन् । कानुनले कतिपय क्षेत्रमा अनिवार्य ‘अनेकता’को नीति लागू गर्नु पनि केही हदसम्म सकारात्मक नै हो । भलै अपूर्ण र आंशिक किन नहोस्, संघीयताको अभ्यास समावेशिताकै सुरुवात हो । यसलाई अझै परिष्कृत र सुदृढ बनाउँदै लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।
कतिपय मूल्य र मान्यता दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुँदै जान्छन् । हिजोका दिनमा ‘अनेकता’ नै पर्याप्त मानिन्थ्यो होला, आज त्यो समावेशिताको पहिलो तह मात्र बन्न पुग्यो । घरबाहिर सिकुवामा बसेर खाना खानेहरूलाई भान्सामा चकटीमाथि बसाएर मात्र समावेशिता हुँदैन । पस्किएर खाना दिएर मात्र पनि हुँदैन । खाना के पकाउने भन्ने निर्णय पनि गर्न पाउनुपर्छ । खाना पकाउने तरिका चुन्ने वा आफैँ पकाउने निर्णय गर्न पनि पाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था 'खान नपाएकाहरूलाई खान दिएकै छौँ त' भनेजस्तो मात्रै भयो । चुलामा सबैको पहुँच पुग्न सकेन । समावेशिता त्यहीँ चुक्यो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७, १३:४१:००